အိန္ဒိယက အပျင်းပြေပုံရိပ်ကလေးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အိန္ဒိယက အပျင်းပြေပုံရိပ်ကလေးများ
Posted by Thuyazaw on Jan 19, 2012 in Copy/Paste | 22 comments
မသိသေးတဲ့သူတွေ ပြုံးနိုင် ရယ်နိုင်အောင်ပေါ့
ဒါလည်းပေါင်းခံကျိူချက်ထားတဲ့ ရေသန့် တစ်မျိူးပဲမဟုတ်လား… သူကြီးလဲ ကြိုက်မယ်ထင်တာပဲဗျို့ တဂျီးရေ အဲဒီ Idea လေးမစိုးဘူးဗျနော် ကိုင်ငှဲ့ နေစရာမလိုတော့ ဘူးပေါ့ …အမှန်အကန်အားပေးသူတစ်ဦးရဲ့ စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုပါပဲ…
ခွေးကမဆိုးပါဘူး…ပိုင်ရှင်ကသာ ခွေးထက်ဆိုးတယ်လို့ ဆိုလိုတာပေါ့ နော်…
တရားရိပ်သာကထွက်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်ကြတာနဲ့ တူတယ်…
မမြဲခြင်းသဘောတွေရင်မှာပိုက်ပြီး ကြင်နာလိုက်ကြမယ်ပေါ့ ….တတ်လည်းတတ်နိုင်ကြပါပေတယ်…
ကားပါမစ်သွင်းလာတာနဲ့တူတယ် နံပါတ်ပြားပါသေးဝူး…. ဟီး
လေအိတ်ဆိုတဲ့ အတိုင်း လေတော့ ထည့် ထားရမယ်လေ….ဒါမှ စာနဲ့ ညီမှာပေါ့ …
သောကကြီးသူတစ်ယောက်ရဲ့ ပူပန်မှုလို့ ဆိုယင်လည်းမမှားဘူးပေါ့ …
ဥက္ကဌတွေ၊ အတွင်းရေးမှူးတွေ၊ အမှုဆောင်တွေက ပိုများနေသလိုပါပဲလား…
လောက…လောက ပြောပြ၊ သြချလောက်ပါပေတယ်…
အင်း….အဲဒီဆန်တွေတော့ ချက်စားလို့ ကောင်းတော့ မယ်…
အညီအမျှပဲ…ဘယ်သူ့ ဘယ်သူမှ ပိုမရဘူး…
ငယ်ကတည်းက အိုင်တီနည်းပညာကို ဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသုံးချနိုင်တာ…
ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ ရုံတင်မက အ၀တ်အစားပါဝတ်ဖို့ မေ့ တာ…
ပုံကောင်းကောင်းတစ်ခုရဖို့ ဆိုတာ လွယ်တယ်မထင်နဲ့ …
တောင့် ထား ဆွပ်ပရား…
ကဲ ရယ်စရာပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ရွာသူ/ရွာသားတွေ အသက်ရှည်ပါစေလို့ ရည်ရွယ်ပြီး ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်တာပါ
ကြီးမိုက်တင်တဲ့ Profectional Photographer က အဘိုးကြီးတောင် ပါသေး..
အိန္ဒိယမှာတော့ ယာဉ်တိုက်မှုဆိုတာ ထမင်းစားရေသောက်လိုပါပဲ.. အကောင်းတိုင်း တင်းရင်းနေတဲ့ ကားမရှိသလောက်ပဲ.. ကားတိုင်းက ပိန်ချိုင့်နေတာပဲ..
အောက်ဆုံးက သုံးဘိန်းကား မှောက်တာ မြင်တော့ ကိုယ်တိုင် ဆိုက်ကားစီးပြီး အရှေ့က တိုက်လို့ လည်သွားပြီး အနောက်က ထပ်တိုက်ခံရလို့ နောက်တပတ်လည်သွားတဲ့ အဖြစ်ကို ပြန်သတိရမိတယ်။
အဲဒီတုန်းကတော့ သံဓိဠာန်ချလိုက်တယ်.. အမလေး မအော်တော့ပဲ ဘုရား ဘုရား ဆိုပြီး တတော့မယ်လို့.. အချိန်မရွေးသေသွားနိုင်တာမို့ ဘုရားတပြီး သေရင် ကောင်းရာ ဘုံလားအောင်..
ဘေးမသီရန်မခ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်လာတော့.. တော်ပါသေးရဲ့ ဟင်းးး ချ နိုင်သွားတယ်။
ဖိနပ်ကို ခတ်ထားကို ပုံကို အကြိုက်ဆုံး
ပုံတွေက အမိုက်စားတွေကြီးပဲ ကြည့်ပြီးရီလိုက်ရတာ
ဇနီးလေးလည်းမကျန်ခဲ့ …ဆန်အိတ်ကြီးလည်းတစ်ခါတည်းအပါ ဆိုတဲ့ ပုံကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ
လောက…လောက ပြောပြ၊ သြချလောက်ပါပေတယ်…”
ဆိုတဲ့ပုံကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလတ်တလောဖြစ်နေတာနဲ့တူလို့။ ဒီပုံကိုအောင်သိန်းလင်းတို့ကြံဖွတ်ကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးပို့လိုက်ပါလား။ ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်သတိထားလို့။
”ပုံကောင်းကောင်းတစ်ခုရဖို့ ဆိုတာ လွယ်တယ်မထင်နဲ့ …
ဖိနပ်ကိုပါ သော့ခတ်လို့ရတယ် ဆိုတာ အခုပုံကို ကြည့်မှပဲ သိတော့တယ်။
အဲဒီ Idea ကိုတော့ ခိုက်သွားပြီဗျို့ …………..
ကျေးဇူးပဲဗျို့ ။ ကြည့်ပြီး ရီသွားတယ် ။ :-)
ကိုကြီးမိုက်ကြီးရေ သတင်းလုတင်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ……. ရွာသူ/ရွာသားအပေါင်း တွေ ပျော်ရွှင်စေဖို့သက်သက်ပါပဲ………. ကိုကြီးမိုက်ကြီးစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင် အပေါ်ဆုံးက ပုလင်း ကုန်အောင်သောက်သွားပါဗျာ………
အမျိူးသမီးက အံကြိတ် ပြီးချနေတာ။ နောက်နေ့ဆို ဂျေးလ် ပဲထင်တယ်၊
If you want to see that kind funny photo or picture, you can check in under blog, actually all photo are from blogger Ko Peter.
thanks yr link
မသိသေးတဲ့သူတွေ ပြုံးနိုင် ရယ်နိုင်အောင်ပေါ့ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ထားပါတယ်………. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတယ်လဲမပြောမိပါ………… ahnyartamar ခုလို မူရင်းဆိုဒ်လေးတင်ပေးလိုက်တော့ ကောင်းတာပေါ့……… ကျွန်တော်လဲ တဆင့်တဆင့် ရရှိရင်း ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်း……………….
စိတ်ညစ်တဲ့စိတ်တောင်ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိရအောင် ရိုက်ချက်တွေ ပြင်းထန်ပါပေတယ်။ ကိုသူရဇော် ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖော်လိုက်တဲ့ စာသားတွေက ပိုလို့တောင်ရီရတယ်။ ဟောပြောသူ ရှေ့တစ်ယောက်ထဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာ အရီရဆုံးပဲ။
ဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့ပုံကတော့ ဦးဦးဘလက်ကြီးလား ဒါမှမဟုတ် ဦးဦးစိန်သော့ကြီးလားမသိ… ပုံကောင်းကောင်းတွေ ထွက်တဲ့ ဆရာတွေဆိုတော့ အဟိ ရယ်ရတယ်နော်။ ပုံတွေက အဓိပ္ပာယ်အပြည့်ပဲ။ စာတပ်ရေးထားစရာတောင်မလိုဘူး။
I’m not blame to anyone, i just shared to all, what i knew small one.
ကြံကြံဖနမပါဗျာ ရနိုင်လွန်းပါပေတယ် ဗျာ။ကျေးဇူးပါဗျာ။